जात | Hamro Patro
# टाँडी -मोरंग
हाल : साउदी अरब
मायामा कुनै जात हुँदैन । जात सिर्फ दुई थरिका हुन्छन एक महिला र अर्को पुरूष तर पनि हामी मान्छौ तर हाम्रो कठोर संस्कार र ठालू जमातलार्इ मान्न कठिन नै पर्छ । त्यस्तै सुमिना र संगमको गाढा बसेको प्रेम जहाँ दुवै एक-अर्का बिना बाच्न नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छन तर उनीहरुको घर परिवारले इन्कार गरेका हुन्छन् दुवैको प्रेमलार्इ ।
बिचरा संगम! जात त ठुलो हुन्छ तर ठुलो जात मात्र भएर नि सुमिनालाई भगाएर लिएर गए पनि पाल्न सक्ने अवस्था थिएन । उसलाई बारम्बार म केहि कमाएर आउँछु अनि तिमीलाई लान्छु भन्ने शब्द बाहेक केहि पनि भन्न सक्दैनथ्यो । यस्तै कारणले चिन्तित थियो संगम! उता सुमिना भने संगमको माया प्रेमबिना जीवन नै अधुरो भएको महसुस गर्छिन तर के गर्नु बिचरा कसलाई भन्नु गल्ति त गरेकी छे सुमिनाले ठुलाे जातको पात्रसंग पिरती गाँसेर ।
समय बित्दै जाँदा संगम र सुमिनाको प्रेम घरायसी व्यवहारले गर्दा बिछोड भएर संगम विदेशतिर गएको हुन्छ । समयले कोल्टे फेर्दै जाँदा संगमको बुबा जातको ठुलो कुरा गर्ने मान्छे गाउँको तालुकदार हुन्छ । मुसलधारे वर्षा भएको हुन्छ पहाडको बाटो आउँदै गरेको अवस्थामा बिच बाटोमा पहिरो र खोलाले बगाएर लैजान्छ तल सम्म पुर्याएको हुन्छ गोठाला गर्ने गोठालेहरुले देख्छन र हतार-हतार गरेर खोलाबाट निकाल्छन । बुढाले धन्यवाद दिंदै लाग्छ ओरालो तिर, साँझ परिसकेको हुन्छ आफ्नो घर पुग्न पनि अझै ६ घण्टाकाे उकालो र ओरालो पार गरे पछि मात्र घर पुग्ने अवस्था थियो । एक त खोलाले बगाएको कारण घुँडाभरि चोटै चोट, बुढेसकालमा कहाँ हिड्न सक्छ र ? बल्ल बल्ल खोलाबाट निकालिएकोले लामो स्वांस फेर्यो र नजिकैको घरमा बास माग्न पुग्यो ।
खुँइय गर्दै बोल्यो, 'घरमा को हुनुहुन्छ होला? आज एक रातको लागी बास पाइन्छ कि?' नेपथ्यबाट आवाज आयो, 'हजुर पाईन्छ । बस्दै गर्नु न बाहिर ?' बुढाले लट्ठी छानामा सिउरियो र घरको पेटीमा थचक्क बस्यो । केहि समय पछि - बुढी आमा आउनु भयो र तातो खान दिनु भयो खानामा मकैको ढिडो, सिस्नाको सब्जी र अचार थियो । मिठो मानेर सबै खायो अनि थाल र बटुका पखाल्न लागेको थियो भित्रमा बाट बुढी आमाले देखिन र थाल नपखाल्न आग्रह गरिन, सुमिना ! बाहिर गएर थाल र बटुका लिएर आऊ त, सुमिनालाई पनि जिज्ञासा लागेको थियो कि हाम्रो घरमा कसले वास माग्न आयो !
सुमिना बाहिर आइन सुमिनालाई देखे बितिकै संगमको बुबा झस्किए किनकी तल्लो जात भनेर हेला गर्ने मान्छेले आज त्यही तल्लो जातको घरमा बास र गाँस दुवै गरे पछि के भयो होला उसको मन - सुमिना पनि झस्किईन ! तपाई ? कहाँबाट यहाँ ? कस्तो अचम्म ? केहि बोल्न सकेनन बूढा अक्क न बक्क भए सुमिना भान्सा कोठा तिर प्रवेश गरिन ।
बूढाको मन भित्र भित्रै पोल्न थाल्यो - मनमा कौतुहलता जाग्न थाल्यो कहिले यहाँ बाट हिडौं । आफैले आफैलाई धिक्कार्न थाल्यो उसले पहिला भनेका कुराहरु र आफ्नो छोरासंग छुटाएका ति दिनहरु सम्झिन थाल्यो अनि मन मनै कल्पिन थाल्यो - जुन जातलाई मैले हेला गरे आज त्यही जातको घरमा बास र गाँस दुवै पाए खै त म मरिन त तल्लो जातले छोएको खाने कुरा खाँदा आखिर यो जात त्यो जात भन्ने भ्रम रहेछ आजबाट मैले चेतना पाए अब मेरो मनबाट कहिले पनि यस्तो भुल हुने छैन यस्तै यस्तै नाना थरि कुरा खेलाउँदै ओछ्यान मा निदाउन पुग्छ । भोली बिहानै त्यहाँबाट जाने तरखर गर्छ र सुमिनालाई भन्छ - मैले ठुलो भ्रम बोकेर बसेको रहेछुँ ! बुहारी त पाउन सकिन तर एउटा छोरी पाएकोछु खुशी हुनु सधैं मुस्कुराई रहनु । बुढो लाग्यो आफ्नो बास स्थानतर्फ !!